Nkọwa nke mmiri mmiri electrolysis chlorination sistemu iji mmiri mmiri okike iji mepụta sodium hypochlorite na-edozi na ntanetị nke 2000ppm site na mmiri mmiri electrolysis, nke nwere ike igbochi uto nke ihe okike na akụrụngwa. A na-edozi mmiri sodium hypochlorite na mmiri mmiri site na mgbapụta metering, na-achịkwa uto nke microorganisms nke mmiri mmiri, azụ azụ na ihe ndị ọzọ. a na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ ndị dị n'ụsọ oké osimiri. Nke a ...
Nkọwa Were nnu nri nri na mmiri mmiri dị ka akụrụngwa site na sel nke electrolytic iji kwadebe 0.6-0.8% (6-8g / l) obere ọgwụ sodium hypochlorite na saịtị. Ọ na - edochi chlorine na chlorine dioxide disinfection system dị oke egwu, na - ejikwa ya na nnukwu osisi mmiri. Nchedo na ịdị elu nke usoro a ghọtara site na ọtụtụ ndị ahịa. Ngwaọrụ a nwere ike ịgwọ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na-erughị 1 nde tọn kwa awa. Usoro a na-ebelata ...
Professional Water Myọcha System, Usoro Ro Desalination, Ro Well Water Ọcha Myọcha, Nhazi System Sodium Hypochlorite, Ro Water Myọcha akụkụ, Mmiri Osimiri Na-a Dụ Ngwa igwe,